China Ndị agha na ndị na-emepụta okpu | Wangjie
1.Material: Ihe: 100% arọ leghaara owu
2.Style: ozuzo obibi akwụkwọ
Vdị Visor: visor curved
5. mmechi: Ime anwansi teepu
6. Akpụkpọ mmiri: Polyester
9. katọn size ： 65 * 45 * 38CM
Ndị ọrụ anyị na-ahụkarị azịza anyị ma tụkwasị obi ma nwee ike mejupụta na-emepe emepe na -achọ ego na mmekọrịta mmadụ na ibe ya maka ndị na-ere ahịa ahịa nke China Acu Tactical Outdoor Us Military Army Patrol Baseball Cap, ụkpụrụ nke azụmaahịa anyị na-enyekarị azịza dị elu, ụlọ ọrụ ọkachamara, na ikwu eziokwu. Nabata ndị enyi gị niile iji nye iwu ikpe maka ịmepụta mmekọrịta nzukọ ogologo oge.
Ndị na-ere ahịa ahịa ahịa nke ndị agha China na okpu agha ndị agha, Anyị ga-ebute usoro nke abụọ nke usoro mmepe anyị. Companylọ ọrụ anyị na-atụle "ọnụahịa ezi uche dị na ya, oge nrụpụta ọrụ dị mma na ọrụ azụmaahịa dị mma" dị ka ụkpụrụ anyị. Ọ bụrụ na ị nwere mmasị na nke ọ bụla n'ime ihe anyị ma ọ bụ na-achọ ịkọwa usoro omenala, cheta nweere onwe gị ịkpọtụrụ anyị. Anyị na-atụ anya ịmebe mmekọrịta azụmahịa na ndị ahịa ọhụụ gburugburu ụwa n'ọdịnihu dị nso.
N'agbanyeghị onye zụrụ ọhụụ ma ọ bụ onye na-azụ ahịa meworo agadi, Anyị kwenyere n'okwu dị ogologo na mmekọrịta a pụrụ ịdabere na ya maka Factory Price China Raw Edge Patch Applique Embroidery Washed Military Cap (TRNM004), N'ihi oke kachasị mma ma na-eme ihe ike, anyị ga-abụ onye ndu mpaghara, mee Jide n'aka na ị na-ala azụ ịkpọtụrụ anyị site na cellular ekwentị ma ọ bụ email, ma ọ bụrụ na ị na-akpali mmasị na ọ fọrọ nke nta ọ bụla nke anyị ihe.
Factory Price China Military Cap na Army Cap price, Anyị setịpụrụ "ịbụ onye kwesịrị ekwesị iji nweta ọganihu na-aga n'ihu na ihe ọhụrụ" dị ka ụkpụrụ anyị. Ọ ga-amasị anyị ịkọkọrịta ahụmịhe anyị na ndị enyi nọ n'ụlọ na mba ofesi, dịka ụzọ isi mepụta achịcha ka ukwuu site na mbọ anyị na-agba. Anyị nwere ọtụtụ ahụmahụ R & D mmadụ na anyị na-anabata OEM iwu.
Na anyị ọgaranya zutere na-echebara ọrụ, anyị ugbu a na e ghọtara maka a tụkwasịrị obi na-eweta maka ọtụtụ n'ụwa ahịa maka High Quality maka China Red First Recon Embroidered Military Baseball Cap, Anyị na-aga na-agbalịsi ike dịkwuo anyị ụlọ ọrụ na-enye ezigbo mma ngwaahịa na oke ọnụ ahịa ọnụahịa. Ajuju obula ma obu nkwuputa obula bu ihe anabatara. Cheta na-esi jide anyị kpamkpam.
Ọdịmma dị elu maka ọnụ ahịa ndị isi China na ndị agha ndị agha, ụlọ ọrụ anyị na-ahụ na ire ere abụghị naanị ị nweta uru kamakwa ọ na-eme ka ọdịbendị nke ụlọ ọrụ anyị pụta ụwa. Ya mere, anyị na-arụsi ọrụ ike iji nye gị ọrụ obi dum ma dị njikere iweta gị ọnụahịa kachasị asọmpi n'ahịa
Nke gara aga: Okpu isi baseball
Osote: n'ogige atụrụ pola ajị anụ okpu
6 Ogwe Baseball
Ugba Camo Baseball
Ulo ulo akwukwo Camo baseball
Okpu Baseball Camo
Ozuzo Baseball Cap
Ozuzo okpu Suppliers
Silkscreen Bipute okpu Omenala okpu
Embroidery papa okpu omenala logo baseball caps
Okpu Beanie mara mma
oyi fuzzy Terry towel ịwụ okpu
Gmụaka Golf Caps